Imithetho eli-10 yokugcina engqondweni ukufumana uyilo olulungileyo. | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UVicky | | Idizayini yeMifanekiso, Amaqhinga, Ezahlukeneyo
Un uyilo kufuneka ahlangabezane nobuhle kunye neemeko zokuqonda ukuze afumane ukuphuma kakuhle, ihlala igcinwe engqondweni injongo yayo.
Ukuthi uyilo lulungile okanye lubi kusekwe kwimithetho esekwe kumava nakwisifundo sabayili abaninzi, imithetho enegalelo kwisiphumo esihle, ngokuthobela okanye ukwaphula loo mithetho. Imithetho ikho ukuze yaphulwe, kodwa oku, okokuqala, kufuneka siqonde ukusebenza kwabo.
Ezi Imithetho eli-10 Esikuxelela apha ngezantsi, ziye zasekwa phantsi kweenqobo zokuchazwa kwesiphumo esifanelekileyo.
Soloko usebenza umbono, umbono wokuba iprojekthi yakho ijikeleze. Ngale nto uyakufumana lonke uyilo lwakho ukunxibelelana nokhangelo lwakho.
Qiniseka ukuba zonke izinto zokwakha zinegalelo kumbono wakho. Musa ukuhombisa umhombiso, into nganye yento kuba injalo ibalulekile kuyilo lwakho.
Cinga ngezithuba zoyilo lwakho, ukuba iindawo ezingenazo iziqwenga zemizobo ziyimfuneko kuyo yonke indawo ukwakhiwa. Izithuba mazenziwe, zingagcwaliswa.
Iitekisi zikwangumbandela, zibaphathe njengemifanekiso, zinxibelelana nabo. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukufundeka kwayo.
Uyilo ayilolwakho, lolwabanye. Kubalulekile ukuba siyazi ukuba siyenzela ntoni injongo, yintoni ekujoliswe kuyo kwaye yintoni le umyalezo esifuna ukunxibelelana nawo.
Yenza umahluko, oku kuyizisa isingqisho esibonakalayo. Ungafezekisa umahluko ngokudibanisa ezinye izinto kunye nokwahlula ezinye, nangombala okanye ukusetyenziswa kweefonti ezahlukeneyo.
Zonke iinketho ozenzayo malunga noyilo lwakho ezine injongo ecacileyo. Ngamanye amaxesha kubalulekile ukuba wazi indlela yokuncama ezinye zezinto esizithandayo kwabanye ezinxibelelana ngcono nombono wethu.
Kubalulekile ukuba wazi indlela yokulinganisa ngamehlo akho. Ngamanye amaxesha kukho izinto ezifuna ukuqonda kwethu ngaphezulu kwefomula yemathematics. Umzekelo, ukuba siphinda-phinda ukubeka izangqa kunye nezikwere ezilinganayo, izangqa ziya kujongeka ngathi zincinci. Singakubonisa ngokuhlengahlengisa oku ngokwenza izangqa zibe nkulu kancinci ukuze zibonakale zilingana nezikwere.
Kulungile ukulandela iintsingiselo, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba uyilo lwethu luyahlangabezana neenjongo ezibekiweyo kwaye ezi zinokungabikho ngoku. Ukwaphula ukuhamba nako kungayinto entsha.
Okokugqibela, liphonononge ibali kodwa ungalikopi. Musa ukoyika ukuhamba kuyilo lwakho, ukuzama kunye nokwaphula imida.
Imithetho ingaphulwa, kodwa ungaze uyihoye. - Igosa likaDavid, Umchwepheli kunye nombhali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imigaqo ye-10 yoyilo olulungileyo
Eli gcisa laseJamani likufundisa ukuba wenze imidwebo ye-3D njengoko esenza